Fanairana hambom-po – Page 2 – Blaogin'i Voniary
Catégorie : Fanairana hambom-po
Mahery fo ny vehivavy
Tsy dia fantatro loatra ny niavian’ilay fiteny hoe “fanaka malemy”. Tsy dia hampitaha ny herin’ny vehivavy sy lehilahy loatra ihany koa no tanjoko. Tsy izany velively, fa te hanaitra ny sainao aho, ianao vehivavy io, fa be herim-po ianao. Raha zohina tokoa manko ny fiainan’ny andriambavilanitra: ny dingana lalovany sy ny olana sedrainy amin’ny maha... Lire la Suite →
Tsara kokoa ny safidy miainga amin’ny fanantenana fa tsy ny tahotra
Maro ny boky sy lahatsoratra navoakan’ny mpikaroka sy mpandalina momba ny fahombiazana, fa zavatra iombonan’izy ireny dia ny hoe ilaina ny mametraka tanjona. Ireny tanjona apetraka ireny no mitaratra ny safidim-piainan’ny isam-batan’olona. Noho izany, misy ifandraisany tsara ny kalitaon’ny safidy atao sy ny tranga misy eo amin’ny fiainan’ny tsirairay. Tsy misy kisendrasendra io, fa izay... Lire la Suite →
Ekena fa eo ireo fenitra napetraky ny rafitra sy ny fiarahamonina, ny tena marina anefa dia samy manana ny fahombiazany ny tsirairay. Ao ireo mieritreritra fa rehefa mahazo fiara izy dia izay no atao hoe tafa aminy. Ao kosa ireo manana tanjona hahazo toerana ambony ara-politika satria izay no atao hoe fahombiazana aminy. Misy kosa... Lire la Suite →
Mitontona amin’ny fotoana mahamety azy ny zava-drehetra
Tandra vadin-koditry ny fiainanany olana ary indraindray mila ho kivy mihitsy ny tena fa toa tsy misy mandeha amin’ny laoniny izay kasaina. Raha tsikaritrao anefa, toa tsy hitahita akory dia miravona ny olana, toa milamina ho azy eny ihany ny zava-drehetra rehefa tongailay fotoana. Fantaro ary fa zava-poana ny ahiahy fa ny tokony hataonao dia... Lire la Suite →
30 novembre 2018	 5
Ny lesona tsara alaintsika Malagasy amin’ilay sarimihetsika Black Panther
Anisan’ireo sarimihetsika be mpankafy indrindra maneran-tany ity Black Panther ity, noho izy manome lanja ny mainty hoditra sy maneho firenena aty afrika mivoatra sy matanjaka.Tsy iresaka mikasika ny fanatontosana avo lenta an’iny sarimihetsika iny aho fa aleo anjaran’ny hafa iny fa ilay votoatin’ny tantara mihitsy no tiako ifampizarana aminareo. Eo ihany manko ilay fijery hoe... Lire la Suite →
27 août 2018	 4
Tsy ny rafitra no mamaritra ny maha-izy azy ny olona
Samy manana ny maha-izy azy ny olona tsirairay, io no antsoin’ny Malagasy hoe HASINA. Tsy ny rafitra no mametraka an’io fa efa ao amiko, ao aminao, ao amin’ny olombelona rehetra. Noho ny rafitra anefa dia lasa voasokajy ny olombelona : ambony sy ambany, mahay sy dondrona, manan-karena sy mahantra sy ny maro hafa. Matetika misy manararaotra... Lire la Suite →
17 juillet 2018	 2
Akako lesona ny tsy fahombiazako
Tsy ary hizotra araka izay eritreretinao avokoa akory ny fiainana fa indraindray mety tojo tsy fahombiazana. Tsy tokony atao ahakivy anefa izany fa fombany ihany. Mitrakà, mandraisa lesona, ary tohizo ny lalanao dia ho mpandresy hatrany ianao. Ilaina koa ny tsy fahombiazana Misy ohabolana Malagasy manao hoe: “soa lavo hahay hamindra, soa kenda hahay hitsako”.... Lire la Suite →